Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay ganacsatada lacaga siiya Al-SHabaab – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay ganacsatada lacaga siiya Al-SHabaab
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Fedraalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya ay la socoto ganacsato Soomaaliyeed, taageerada dhaqaalle siiya ururka Al-Shabaab.
Wasiirka waxaa uu sheegay inay tahay wax cad oo aan qarsooneyn in Al-Shabaab goobkaste oo ganacsi ay ka qaataan dhaqaalle joogto ah,islamarkaana ganacsataddu ay lacagtaasi u bixiyaan si ay u badbaadiyaan Naftooda iyo maalkooda madaama shabaabku ay ku sugan yihiin meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah.
Wasiir Maareeye ayaa sheegay in Wasaaradda Amniga Soomaaliya u waajib ka saaran yahay inay wax ka qabato dhaqaallah qaar badan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ay siinayaan Al-Shabaab.
Dhanka kale Wasiirka ganacsiga Soomaaliya ayaa Golaha wasiirada ku dhaliilay inaysan wali ansixin gudiga Tayo-dhowrka badeecadaha Soomaaliya oo ay soo gudbisay Wasaaradda Ganacsiga, islamarkaana Muddo bilooyinka ah uu yaalla Xafiiska ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya,wuxuuna wasiirku Tilmaamay in sharcigaas oo la meel mariyo uu wax badan ka tarayo tayada badeecada gudaha Soomaaliya.
← Dowladda Mareykanka Oo Ciidamo Cusub U Soo Diraysa Soomaaliya
200 oo tahriibayaal ah oo sannadkan ku dhintay badda Mediterranean-ka →